Neymar:”Messi ayaa ka wanaagsan Ronaldo”
HomeSpainNeymar:”Messi ayaa ka wanaagsan Ronaldo”
30/04/2014 Khadar Dirir
Xiddiga Barcelona iyo xulka Brazil “Neymar de Silva” ayaa sheegay in aanu soo bandhigin xili ciyaareedkan wixii looga baahnaa, isagoo balan qaaday in xili-ciyaareedka dambe uu wacdaro dhigi doono, isagoo digniin u diray dadka ka shakisan awoodiisa.
Laacibkan oo la hadlay wargeyska El Mundo Deportivo, ayaa tilmaamay in sidii laga filayay aanu soo bandhigin xiligan, laakiin uu bartay waxyaabo badan, isagoo yidhi hadii aan la qabsado jawiga waxaan soo bandhigi doonaa 100% awoodeyda.
Waxaa la weydiiyay xiliga uu garoomada ku soo laabanayo? wuxuuna ku jawaabay waxa laga yaabaa inaan ciyaaro kulanka ugu dambeeyay horyaalka.
Neymar waxaa kale uu ka hadlay Messi iyo Ronaldo, isagoo yiri hadaan iraahdo Lionel Messi ayaa ka wanaagsan Ronaldo been ma sheegin, maalin kasto ayaan tababar la qaataa, waa laacib weyn oo heysta awood sare.
Kooxaha Barcelona, RealMadrid iyo PSG Oo ku tartamaya helitaanka Paul Pogba
Real Madrid 2-2 (Live ) = Qaybtii Koowaad oo lagu kala nastay 2-2